आमा श्रद्धाभावका ६ कविता - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आज वैशाख कृष्ण औँसी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन । ममीसँग बिहान आधा घण्टा फोनमा बोले । ‘घर आउन सकिन ममी’ भनें । “पहिले आइनस्, अब रोगले दिएन । जोगिएर बस्, बाहिरफेर ननिस्कि ।”, ममी बोलिरहनु भयो । “भाइले पनि फोन गर्या’थ्यो । बहिनी त छे तर तिमारु आको भए अलि मन रमाउथ्यो । मामाघर पनि गईन् । घरमा कल्लाई छोडेर जानु ? गाउँमा खसी काट्ने भन्या छन् । तिमारु दुवै दाजुभाई आएनौँ । लेराएर खाँ तँ पनि आधा किलो । पेट नसुकाँ । काम काम मात्रै नभन् ।” ममी अझ बोलिरहनु भयो । मेरो सास घाटीमै अड्कियो ।
फरक प्रसंगमा भन्नुभयो,”खै त ओठे, एउटा कविता पनि लेखिनिस् त आज ?”
“ह्याँ ममी, यस्तो कुरा त नगर्नु हाउ । डर लागिरा हुन्छ, लेख्न कहाँदेखि सक्नु ?”
“ख्याल गर । आफ्नो जीउको ख्याल गर । हामी सबै ठिक छौं । नआत्त्ति । त भन्दा पहिले पालो हाम्रै हो । हामी त आत्तिएका छैनौं ।” हामी भनेर बुबा र आफूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो । के बोलु बोलु भयो फोन काटीदिए ।
फोन काटीएपछी निकैबेर टोलाए । कविता लेख्न थालेको ५ वर्ष भयो । मेरो कविताहरुको श्रोता मेरो ममी पनि हो । “अनि ममी, कविता कस्तो भयो” भनेर सोधे भने “अघिल्लो चाहिँ राम्रो थियो” भन्नुहुन्छ । र,म थप एउटा अर्को कविता लेख्न हौसीइरहेको हुन्छु । ममीको यो सधैंको हो । थप अर्को कविता नलेखेसम्म मेरो अघिल्लो कविताबारे उहाँ बोल्नुहुँदैन ।
इमोमा, मेसेन्जरमा, फोनमा या घर पुग्दा ओछ्यानमा बसेर म ममीलाई कविता सुनाउँछु । शुरुशुरुमा ममीको डायरीबाट चोरेर कविता लेख्थे । र, स्कुलमा पुरस्कार स्वरूप, चक, कापी, फाउनटेन पेन जित्ने गर्थे । ममी आजभोलि कविता लेख्नुहुन्न् । उहाँमा कविता लेख्ने हुटहुटी अझै पनि छ । यसैले हप्ता दश दिन भएपछी सोध्नुहुन्छ, “खै त ओठे, तेरो फेसबुकमा त केहि पनि छैन ?” हो पनि, निकै भयो मैले एउटा कविता लेख्न सकेको छैन् ।
आजसम्म मैले आमाको बारेमा कविता लेखेकै रहेन’छु । पोहोर साल आगुन तपाइको बारे एउटा दामी लेख्छु ममी भनेको थिए। सकिन । खिन्न मनसहित फेसबुक चाहारे । आमाप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै लेखीएका कविताहरुले सामाजिक सञ्जाल भरिएका रहेछन् । पढ्दै गए, एकएक कविता । आमाप्रति सबै श्रदाभाव उस्तै थियो !
यसभन्दा अघि आफूले पढेका (मनपरेका) केहि कविताहरु पनि सम्झिए । कलरनोट भित्र ‘सेभ्ड’ यी कविताहरुले आमाप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्नुका साथसाथै मेरो खिन्नता पनि मेटायो । (मैले यहाँ सम्झिन नसकेको कविताप्रति पनि मेरो श्रद्धा छ )